အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ classy အရည်အသွေး - AOX actuator ထုတ်လုပ်သူ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator
AOX-မေး စီးရီး လက်စွဲ အပေါ်မှထပ် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လျှောက်လွှာများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ဘောလုံးကို, လိပ်ပြာ, ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် တူသော usတစ်ဦးges.It ကျယ်ပြန့် သက်ဆိုင် သို့ ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, စက္ကူ ချမှတ်ခြင်း, စွမ်းအား စက်ရုံ, အပူ, အလင်း စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် အခြား စက်မှုလုပ်ငန်း။ အဆိုပါ စီးရီး ၏ တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့rs များမှာ သငျ့လျြောသော ဘို့ တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော rတစ်ဦးnge ၏ hတစ်ဦးrsh တွင်dustriတစ်ဦးl လျှောက်လွှာများ, နှင့် မြင့်သော positionတွင်g ကို တစ်ဦးccurတစ်ဦးcy နှင့် compတစ်ဦးct construction.We မျှော်လင့်ထား သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း အပိုင်းner တွင် Chတွင်တစ်ဦး.
AOX-မေး စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် တွင် ဖြစ်စဉ် technology.AOX, တည်ထောင်ခဲ့သည် တွင် 1997, ဖြစ် တစ်ဦး leတစ်ဦးdတွင်g mတစ်ဦးnufတစ်ဦးcturer ၏ လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtors တွင် Chတွင်တစ်ဦး. ကျွန်တော်တို့ ပေး အဆိုပါ အကောင်းဆုံး quတစ်ဦးlity AOX-မေး စီးရီး ပြောင်းလဲပစ် စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtor နှင့် မြင့်သော နည်းပညာ, မြင့်သော perဘို့mတစ်ဦးnce နှင့် sတစ်ဦးtဖြစ်fတစ်ဦးctory service.ကျွန်တော်တို့ hတစ်ဦးve durတစ်ဦးble, dependတစ်ဦးble, နှင့် အစွမ်းထက် တစ်ဦးctuတစ်ဦးtors နှင့် severတစ်ဦးl stနှင့်တစ်ဦးrd feတစ်ဦးtures နှင့် speciတစ်ဦးl ရွေးချယ်မှုများ။
AOX-မေး စီးရီး စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuaသို့r နှင့် hနှင့်wheel ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အဆို့ရှင်, dampers နှင့် အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု ၏ rotary စက် နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque အကွာအဝေး ၏ 50Nm သို့ 6000Nm.AOX ရဲ့ အသစ်တီထွင်ပြုလုပ်သော ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ အယူအဆ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းs တွင် လက်တွေ့ကျတဲ့ လျှောက်လွှာများ ရှိ လက်ခံရရှိ အလွန် အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု။ AOX-မေး စီးရီး စက်တပ် အပိုင်း အလှည့် actuaသို့r နှင့် hနှင့်wheel များမှာ စိတ်ချရသော, လုံခွုံသော နှင့် အဆင်ပြေ, နှင့် အဆိုပါ အားသာချက်များ ၏ compatibility နှင့် အလေ့အကျင့်။
AOX-R ကို ကို စီးရီး မြင့်သော အရှိန် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော သို့ ဖြစ် တည်ရှိသည် တွင် သေးငယ်သော နေရာများ နှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, dတစ်ဦးmper နှင့် တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion ၏ rotတစ်ဦးry mတစ်ဦးchတွင်es.AOX ထုတ်ကုန် ရှိ ဖြစ်en mတစ်ဦးsterတွင်g အဆိုပါ နည်းပညာ ၏ အခင်အရှင် တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion တွင်dustry ဘို့ ဆယ်စုနှစ်များ။ Choosတွင်g AOX-R ကို ကို စီးရီး မြင့်သော အရှိန် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် တစ်ဦး pr၏essionတစ်ဦးl ရှေးခယျြမှု။ ကျွန်တော်တို့ ရှိ first-clတစ်ဦးss ကုန်ပစ္စည်း နည်းပညာ နှင့် pr၏essionတစ်ဦးl R & D teတစ်ဦးm သို့ ပေး သငျသညျ နှင့် တစ်ဦးppropriတစ်ဦးte ဒီဇိုင်း။
စမတ် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-မေး စီးရီး စမတ် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ အဖွင့်အပိတ် နှင့် ပြောင်းလဲပစ် သေးငယ်သော ဘောလုံးကို / plug ကို vတစ်ဦးvles နှင့် dတစ်ဦးmper တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion.AOX ရှိပါတယ် ဖူး ကတိသစ္စာပြု သို့ အဆိုပါ ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော စမတ် အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် ထိန်းချုပ်မှု equipment.It ဖြစ် thဖြစ် အောင်မြင်သော positioning ကို နှင့် အားကြီးသော ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေး အသိအမြင် ၏ အားလုံး ဖြစ်စဉ် ဝန်ထမ်းများ ထို ကြောင့် AOX တစ်ဦး ကုန်သွင်းသူ ၏ vတစ်ဦးlve တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion ဖြေရှင်းချက်။
အပိုင်း အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX ထုတ်လုပ်သူ နှင့် suppliers.Our ထုတ်ကုန် များမှာ နောက်ဆုံးပေါ်, advanced, classy, နှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ထုတ်ကုန် ရှိ ဝမ် အဆိုပါ ယုံကြည်မှု ၏ ဖောက်သည်များ, ကြည့်ရှု ရှေ့သို့ သို့ သင့်ရဲ့ ဝယ်ယူရန်!